Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.1 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
Aprilပြီလ 2019, 10 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
မစ္စတာ Tanaka သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မိသားစုစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်ခဲ့စဉ်ကတည်းကရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ခေတ်မီအနုပညာနှင့်အတူ Tamagawa inရိယာရှိဘူတာများနှင့်ပန်းခြံများကဲ့သို့သောအများပြည်သူနေရာများကိုရောင်စုံရန်စီမံကိန်း၊ Kamata အရှေ့ထွက်ပေါက်streetsရိယာရှိလမ်းများနှင့်အများပြည်သူနေရာများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်throughရိယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကလေးငယ်များအားအနုပညာပို့ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများ။ လည်ပတ်ရန်နေရာများစွာရှိသည်။
အနုပညာနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်စီမံကိန်းများအကြောင်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်၏အခန်းကဏ္aမှာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များသည်အနုပညာဒါရိုက်တာများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့်ဒီဇိုင်နာများကဲ့သို့သောအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ငွေကြေး၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအမျိုးမျိုးစသည်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ တိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စသည်တို့လည်းပါဝင်သည် "
မူလအနုပညာနယ်ပယ် (* XNUMX) နှင့်ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်ကိုတောင့်တခဲ့သောမစ္စတာတန်နာကာသည်ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးမကြာမီရှေ့တန်းတွင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်သောအနုပညာရှင်များနှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။နောက်ခံဗဟုသုတရှိသော်လည်းသူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပါ ၀ င်လာလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ပါ။
တကယ်တော့သူတို့နဲ့အတူလယ်ကွင်းထဲမှာအတူနေပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူသားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာ၊ အတူတကွတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း။ ငါရှေ့တွင်အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၏တကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကအတူတူပါပဲ။ လူသားတွေရဲ့ပထမနေရာမှာရှိတယ်။ ပြည်သူလူထု၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်“ ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံ” ကဲ့သို့သောအရာမရှိ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်စီမံကိန်းတွင်မဆိုအရေးကြီးဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေအနေနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်မည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်နည်း။ ဘယ်လိုခံစားရမယ်၊ ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာပါ။ ဒီလိုမျိုးပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုဟာအသိုင်းအဝိုင်းတခုခုရဲ့လည်ပတ်မှုခံစားချက်နဲ့နီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ "
Atelier အဆောက်အအုံ "HUNCH"
လက်ရှိတွင်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်လုပ်ဆောင်နေသောမစ္စတာတန်နာအတွက်မူလက်ရှိမြို့တော်နှင့်လူ့ဘဝသည်ပျော်ရွှင်မှုဆီသို့ ဦး တည်နေခြင်းလားဆိုသည်မှာတွန်းအားဖြစ်သည်။
အများပြည်သူဆိုင်ရာအနုပညာစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစလုပ်ကတည်းကလူထုဟာဘာလဲ၊ အနုပညာကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုငါမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဥပမာ၊ ငါကတာတာအရှေ့ထွက်ပေါက်areaရိယာမှာmanagementရိယာစီမံခန့်ခွဲမှုမှာပါ ၀ င်တယ်။ "လမ်း "လူတွေကိုနေစရာနေရာဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမသိခင်မှာအဲဒါဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါကိုရဲနဲ့အစိုးရကစီမံတယ်။ အဲဒီနေရာကို" အများပြည်သူသုံးနေရာ "လို့ခေါ်တယ်။ public? ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ လူတွေကဒီကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့နေရာဟာအများပြည်သူအတွက်နေရာဖြစ်နိုင်သည်။
"ကျွန်တော်ကဂီတကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပေါ့ပ်သီချင်းတွေထဲက" city "တည်ရှိမှုပျောက်ကွယ်သွားတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဂျပန်မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာပေါ့ပ်သီချင်းတွေရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္wasက။ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ အချစ်သီချင်းတွင် "ငါနှင့်မင်း" သည်မြို့၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမြို့ထဲတွင်အလားတူ "ငါ" များစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမြို့တစ်မြို့သည်ဤအရာတစ်ခုစီ၏အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုငါထင်သည်။ စကားလုံးများအားဖြင့်လူများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူအဓိကခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ၎င်းကို“ Round World (* 1990)” ဟုခေါ်သည်။ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်မြို့သည်ငါတို့အတွက်နောက်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်၊ ပြောရမယ်ဆိုရင်မြို့တည်ရှိမှုကငါတို့အတွက် "အရာဝတ္ထု" ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအလယ်ပိုင်းလောက်မှာတောင်မှအရာဝတ္ထုပျောက်ကွယ်သွားပြီးလေ့လာတွေ့ရှိချက်က "ကိုယ့်ကိုယ်ကို" ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
Tamagawa အနုပညာလိုင်းစီမံကိန်း "Tokyu Tamagawa လိုင်း Numabe ဘူတာ"
မစ္စတာတန်နာကဤသို့သောဖြစ်ရပ်သည်မြို့တွင်းတွင်လူများမပါ ၀ င်နိုင်တော့သောလက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ခေတ်သစ်စက်မှုအရင်းရှင်စနစ်တိုးတက်လာသည့်အခါလူတို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောမြို့ပြဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်လာကြသည်။ သူတို့၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်၊ သို့သော်“ ပတ် ၀ န်းကျင်၏အခြေအနေ” မှာဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရသည်။ ရှိလျှင်။
"အခုဆိုရင်လူ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့နေရာကမြို့နဲ့လူဘဝကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ မရေမတွက်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဘ ၀ ဟာမြို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာပြီးမြို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကလူတွေရဲ့ဘ ၀ တွေနဲ့အတူတူပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အများပြည်သူအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုကမ္ဘာကိုပြန်လည်ရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ "
* 1 အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပုံစံ၏အယူအဆ။လူကြိုက်များအနုပညာဆန့်ကျင်အဖြစ်ဒါဟာစင်ကြယ်သောအနုပညာကိုဆိုလိုသည်။
ဂျာမန်ဇီဝဗေဒပညာရှင် Jacob Johann von Yukscur မှထောက်ခံအားပေးသည့်အယူအဆ။သက်ရှိအားလုံးသည်ရည်မှန်းချက်ရှိသောကမ္ဘာတွင်မဟုတ်ဘဲသက်ရှိသတ္တဝါတစ်မျိုးစီ၏သိမြင်နားလည်မှုနှင့်တန်ဖိုးများဖြင့်ကမ္ဘာကိုပုဂ္ဂလဓိcreates္ဌာန်ကျကျဖန်တီးသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၌နေထိုင်ကြသည်။ (Yukusukuru / Kriszat၊ Toshitaka Hidaka et al ။ ဘာသာပြန်ထားသော "သက်ရှိများမှမြင်ရသောကမ္ဘာ", 2, Iwanami Bunko)
အနီရောင်အစက်အပြောက် + ပျား!
Haneda လေဆိပ်နှင့် Senju အနုပညာအကြားဆက်သွယ်မှု
Hiroshi Senju ၏အနုပညာလက်ရာများမှာ Ota Ward ရှိကောင်းကင်သို့တံခါးပေါက်ဖြစ်သော Haneda လေဆိပ်အနီးတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
Haneda လေဆိပ်နှင့် Senju ၏အနုပညာအကြားဆက်သွယ်မှုကို Terminal 1 ဖွင့်သည့် ၁၉၉၃ တွင်စတင်ခဲ့သည်။
ပြတိုက်၏အစတွင်, လူငယ် terminal ကိုအတွက် - လာမယ့်အနုပညာရှင်များ၏အနုပညာလက်ရာများ (ပန်းပု, အရာဝတ္ထု, ပန်းချီကားများ, etc) ပြသရန်အစီအစဉ်ရှိခဲ့သည်နှင့်ပေါ်လာ -and လာမယ့်အနုပညာရှင်တစ် ဦး မစ္စတာဖြစ်ခဲ့သည် ။ Senju၎င်းနောက်ပန်းချီကားများလှူဒါန်းခြင်းနှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Venice Biennale ၏ပန်းချီအပိုင်းတွင် Oriental အဖြစ်ပထမဆုံးဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Terminal 1995 ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Mr. Senju အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သူ့ကိုအနုပညာထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကြိုဆိုပြီးကမ္ဘာသို့ပို့ရန်နေရာတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ထို့နောက်သူသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းဖွင့်လှစ်မှုတွင်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး Haneda လေဆိပ်တွင် Mr. Senju ၏အနုပညာလက်ရာများကိုပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများသာမကနိုင်ငံတကာလေယာဉ်များတွင်ပါခံစားနိုင်သည်။
Terminal2အယူအဆသည်“ ပင်လယ်” ဖြစ်သဖြင့်အလုပ်တွင်“ အပြာ” များပါ ၀ င်သည်။Senju ၏အတွေးများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများသည်ပန်းချီကားတိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ပြီး၊ ထွက်ခွာခြင်းမတိုင်မီခရီးနှင့်စိတ်သက်သာမှုကိုဖော်ပြသည့်ပန်းချီကားတိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Hiroshi Senju "Kaze no Gorge" ပြည်တွင်း Terminal 2
သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လပုံသဏ္hornာန်ချိုနဲ့ပန်တဲ့သတ္တဝါတွေအတွက် Paleolithic လိုဏ်ဂူပန်းချီကားတွေကိုစကြဝuniverseာနဲ့ဆက်နွှယ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကူးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။
Hiroshi Senju "MOOON" ပြည်တွင်း Terminal 2
Leonardo da Vinci ကကောင်းကင်မှာပျံသန်းချင်တဲ့သူက "အဝေးမှမြင်ကွင်းအားလုံးသည်အပြာရောင်သို့ချဉ်းကပ်သည်။ "ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးငါအပြာရောင်အပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
ထို့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းခရီးစဉ်များကိုလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်တိုင်းပြည်သို့ Haneda လေဆိပ်မှ ၀ င်ခွင့်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာခွင့်ရသောအခါအလုပ်များကိုရှာဖွေပါ။
Terminal2၏လုပ်ဆောင်မှုများကို Haneda လေဆိပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Haneda လေဆိပ်မှတာဝန်ခံက "၂၀၂၀ မတ်လမှာ Terminal 2020 ဟာပြည်တွင်းနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေအတွက်ဆိပ်ကမ်းတခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဂျပန်အနုပညာကိုဂျပန်အတွက်သာမကနိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ပါအနုပညာပြမယ်။ အလုပ်ကိုပျော်မွေ့ပါ။ Mr. Senju ၏အတွေးနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုခံစားပါ။ "
ကျေးဇူးပြုပြီး Haneda Airport ရှိပန်းချီကားကိုသွားပါ။